Home Wararka Wasiirka Amniga JL oo sababeeyay diidmada Jubaland ee ciidanka DF geysay Gedo
Wasiirka Amniga JL oo sababeeyay diidmada Jubaland ee ciidanka DF geysay Gedo
Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubaland, ayaa bixiyey wareysigii ugu horeeyay tan iyo markii la sheegay in uu ka baxsaday goob uu ugu xirnaa Dowladda Soomaaliya.
Janan oo u waramay idaacadda galabnimo ee BBC-da ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo quseeya xaaladaha ka jira gobolka Gedo.
Cutubyada ay xukuumada federaalka geysay gobolkaas ayuu ku qeexay “ciidamo lagu keenay aragti ka duwan middii ay kuwada shaqeynayeen askartii horey u joogtay degaanada Jubaland”.
Ciidamadda maamulada iyo kuwa federaalka ayuu caddeeyay “in ay isla joogi karaan, hadii aanan la siyaasadeyn hadafkooda”.
“Hadaba, Kismaayo waxaa isla jooga ciidamo federaalka oo milatari ah iyo kuwa Jubaland leedahay oo isugu jira Daraawiish, boolis iyo nabad-sugi intaba leh, si nabad ah iyo hal shaqo kawada hayo”.
Wuxuu raaciyey: “Laakiin, kan la keenay gobolka [Gedo] gaar ahaan degmooyinkaan [Beledxaawo, Doolow iyo Baardheere] aragti taas ka duwan baa lagu keenay, mana shaqeyneyso Insha Allah”.
Wasiirka ayaa si adag wuxuu carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in lagu dhaqmo dastuurka iyo nidaamka federaalka ee hirgalay.
Villa Soomaaliya oo uusan xiriir fiican kala dhaxeyn Jubaland ayaa la sheegay in ay qorsheyneyso maamul kale oo ay ka hirgeliso gobolka Gedo, si ay xasilooni daro iyo is-bar-bar-yaac maamul u abuurto.